Ogaden News Agency (ONA) – Farmaajo oo Saraakiisha Dowladda kala Hadlay Sugida Amniga Dalka.
Farmaajo oo Saraakiisha Dowladda kala Hadlay Sugida Amniga Dalka.
Kulan uu shir guddoominayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna ka qeybgalleen saraakiisha laamaha amniga dowladda ayaa looga wada hadlay qodobo dhowr ah sida uu sheegay taliye ku-xigeenka labaad ee booliiska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed.
Taliye ku-xigeenka ayaa sheegay in madaxweynaha uu isugu yeedhay taliyeyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada iyadoo kulanka looga wada hadlay labo qodob oo sida uu hadalka u dhigay muhiim ah, gaar ahaan sidii ay dowladda ula wareegi laheyd guud ahaanba amniga dalka.
Madaxweynaha ayaa si gaar ah uga hadlay arinta ku saabsan kala wareegida ciidamada AMISOM sugida amniga dalka, isaga oo sheegay in hay’addaha kala duwan ee nabad-galyada iyo saraakiisha ciidamada loo baahan yahay in ay u diyaar-garoobaan.
Dhinaca wada shaqeynta ciidamada ayuu madaxweynuhu sheegay in looga baahan yahay laamaha amniga in ay yeeshaan wada shaqeyn buuxda, meeshana laga saaro xurgufta iyo waxyaabaha mar marka qaar ka dhax dhaca.
Dhawaan ayeey aheyd markii magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir dowladda iyo AMISOM ka yeesheen amaanka dalka iyo sidii ay dowladda ula wareegi laheyd kaasoo laga soo saaray qodobo dhowr ah oo la xiriiray sugida amniga dalka.
Shirka maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa imanaya kaddib qarax ay ku nafwaayeen ku dhawaan 10 ruux oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.